सडक कब्जा गरि गरिएको कार्यक्रममा मेयर नै प्रमुख अतिथि भए – Ranga Darpan
सडक कब्जा गरि गरिएको कार्यक्रममा मेयर नै प्रमुख अतिथि भए
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: May 28, 2018
वीरेन्द्रनगरको मुख्य चोक वीरेन्द्रचोक शनिबार कब्जामा थियो । कारण हो, सुर्खेत महिला जेसीजले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्र्तगत आयोजना गरेको ‘स्लो स्कुटी ड्राईभ’ प्रतियोगिता । त्यो पनि वीरेन्द्रचोकको मूल सडकमै मञ्च ठड्याएर । मुल सडकमै कार्यक्रम आयोजना गर्दा सडक चार घण्टासम्म अवरोध भयो । सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेकाले आवत–जावतमा सास्ती भोग्नु प¥यो । महिला जेसीजले घण्टौंसम्म सडक अवरोध गरिरहँदा उनीहरुलाई जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र स्कुटीका स्थानीय विक्रेता तथा कम्पनीहरुले झनै हौंस्याएका थिए ।
यस्ता कार्यक्रम गर्न वीरेन्द्रनगरमा थुप्रै स्थानहरु छन् । तर, वीरेन्द्रचोक नै किन रोजियो ? त्यतिका खुल्ला चौर छोडेर गाडी गुड्ने सडकमै किन बनाइयो मञ्च ? सडक कब्जा नगरे अरुको ध्यान खिच्न सकिन्न । स्कुटीको विज्ञापन हुँदैन । र, रवाफ देखाउन पनि पाइँदैन । यीनै स्वार्थ र गलत मानसिकताका कारण पछिल्लो समय राजनीतिक दलदेखि सामाजिक संघ÷संस्था र व्यवसायिका कार्यक्रम गर्ने रोजाइँको पहिलो स्थान सडक नै बन्ने गरेको छ ।
अरुलाई व्यक्तित्व र क्षमता विकासको सीप सिकाउछौं भन्दै दुहाई दिने जेसीजले पनि खुल्ला चौरहरु छाडेर सर्वसाधारणले आवत–जावत गर्ने सडकमै कार्यक्रम गर्न उपयुक्त ठान्यो । उसको त्यो काममा केही व्यवसायी र जनप्रतिनिधिलेसमेत जमेरै साथ दिए । आफूले घण्टौ्रं सडक अवरोध गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुन्छ होला भन्ने सम्मको अंकल नराख्ने जेसीजले अरुलाई के व्यक्तित्व विकास गर्न सिकाउँला ? मानौं, उनीहरुका लागि सडक नै मञ्च हो, सडकमा आवत–जावत गर्ने नागरिकको अधिकार खोसिए पनि खोसियोस् ! यात्रुलाई मर्का पर्ने गरी सडक अवरोध गर्दा यसले नागरिकलाई कति सास्ती दिन्छ भन्ने उनीहरुलाई के को मतलब ?
मेयर नै प्रमुख अतिथि
वीरेन्द्रचोक साँघुरो हुँदा सवारी साधन आवत–जावतमा अब्ठ्यारो भयो भन्दै केही दिन पहिले चोक नै डोजर लगाएर भत्काउने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी पनि जेसीजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर बसे । अतिथि भएर भाषण गर्न पाएपछि उनले सडक अवरोधको मतियार आफै बनेको पत्तो पाएनन् । अतिथि बनाएर उनको आँखामा आयोजकले छारो हाल्यो । कार्यक्रममा आफैं सहभागि भएपछि सडक अवरोध गर्नेलाई मेयरले अंकुश लगाउन सक्ने कुरै भएन । बहुसंख्यक जनताको आवागमनको अधिकारको हनन हुने गरी एकाध साना समूहले आफूखुसी सडक कब्जा गर्ने अपसंस्कृतिलाई नगरप्रमुखले नै साथ दिएपछि वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित र विकसित कहिले हुने ? केही वर्षयता रमाइलो गर्नदेखि रिस फेर्नसम्म सडककै प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जसमा अंकुश लगाउन राज्य संयन्त्र निष्क्रिय देखिने गरेका छन् ।
जसले जे गरे पनि हुन्छ !
सडकमा मञ्च बनाएर कार्यक्रम गर्न कसैको स्वीकृति लिने चलन छैन । यतिसम्मकी बजार यरियामा कसैको विवाह भए दुई÷तीन दिन सडक अवरोध हुन्छ । विवाहको टेन्ट सडक ढाक्नेगरि बनाइन्छ । ट्राफिकलाई यहाँ कार्यक्रम गरिँदैछ भनेर जानकारी गराइदिए पुग्छ । ट्राफिक पनि आयोजकले भनेपछि सडक अवरोधलाई बलपुग्ने गरी व्यवस्थापकीय काममा जुट्छ । आयोजकलाई नै साथ दिँदै छेकबार र सुरक्षाको तयारी गर्छ । नेपाल प्रहरी सुरक्षाका लागि तैनाथ भइहाल्छन् । सामान्यतया सडक आसपासका समेत कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु पनि छन् । उनीहरुको अनुमति लिनुपर्नेमा यस्ता कार्यक्रम हुँदा जनप्रतिनिधिहरुलाई खबरसम्म गरिँदैन ।
‘हामीकहाँ उपयोग वा विकासका लागि होइन, अवरोध गर्नका लागि सडक बनाएको जस्तो भएको छ,’ वीरेन्द्रनगर– ६ का वडा अध्यक्ष मोतिप्रसाद कंडेलले भने । सडक अवरोध हुनेगरि कार्यक्रम नगर्न आफूहरुले अनुरोध गर्ने गरेपनि आयोजकले अटेर गर्ने गरेको उनले बताए । ‘महिला जेसीजको कार्यक्रम पनि जानकारी नदिएर गरिएको हो, रोक्दा रोक्दै जवरजस्ती गरे,’ अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘अटेर गर्ने जति सकिदो रहेनछ ।’ सडक अवरोध गरेर कार्यक्रम भइरहेको गुनासो आएपछि आफू त्यहाँ पुगेर आयोजकलाई सडकमा कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गर्दा पनि नटेरेको उनले दावी गरे । अबदेखि वडाको अनुमति विना सडक अवरोध हुनेगरि कुनै कार्यक्रम गर्न नदिने उनले बताए । सधैँ व्यस्त रहने सडकमा झनै ट्राफिक जाम गराउने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रायः स्वीकृति लिइँदैनन् । किनभने, नलिए पनि कसैले रोक्दैन । नजिकै उभिरहेको ट्राफिक प्रहरीलाई गुनासो गरेर केही हुन्न । यस्ता कार्यक्रमको प्रहरी आफैंले स्कर्ट गर्छ । स्वीकृति लिए पनि, नलिए पनि ।
वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएसंगै बढ्दो जनघनत्व र सवारीसाधन संख्याको अनुपातमा सडक त्यसै पनि अपुग र साँघुरा छन् । सडकको फूटपाथ हटाएर नगर व्यवस्थित गर्ने योजनामा रहेको नगरपालिकाका लागि सडकमा कार्यक्रम गर्नेहरु अर्को चुनौती बनेका छन् । ‘सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी छोटो समयमा सकिने कार्यक्रम बाहेक घण्टौं सडक रोकेर आवागमन अवरोध हुनेगरि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वीरबहादुर वलीले भने । कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनसंग अनुमति लिएको हुनुपर्ने उनले बताए ।
(यो खबर हिजोको सुर्खेत बुलबुले दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
निशान भट्टराईको भुन्टी १ न. ट्रेन्डिङमा ,,
नेपाली लोकदोहरी क्षेत्रको ईतिहासमै पहिलो पटक अत्याधुनिक क्यामरा Red Epic बाट छायांकन गरियो पुर्णिमाको रात ,,
जाजरकोटकि युवतीमा बाँकेमा अपहरणपछि बलात्कार